Nagu saabsan - Sichuan Yinye Medical Technology Co., Ltd.
Sichuan Yinye Teknolojiyada Caafimaadka Co., Ltd.
Hay'ada Caafimaadka Aduunka Waxaan nahay
Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 100 shaqaale, in ka badan 30 waddanna waxay leeyihiin iskaashi ka hortagga aaladda faafa. Yin Ye waxay in muddo ahba wadashaqeyn dhow la laheyd jaamacado badan oo caan ah iyo machadyo cilmi baaris oo ku yaal Shiinaha, waxaana ka go'an inay horyaal u noqoto tikniyoolajiyadda ka hortagga cudurrada faafa.
Yinye caafimaad ee suuqgeynta iyo adeegga adeegga ayaa daboolay dhammaan gobollada adduunka. Hadafka shirkaddu waa "Horumarinta Tiknoolojiyada iyo Faa'iidada Caafimaadka Aadanaha" iyo "Tayada ayaa go'aamisa nolosha iyo dhimashada shirkadaha, Macaamiisha ayaa go'aamiya guusha ama guuldarada shirkadaha, Talent ayaa go'aamisa barwaaqada iyo hoos u dhaca ganacsiga, iyo hal-abuurnimada ayaa go'aamisa mustaqbalka shirkadaha "himiladeeda. Qiyamyada asaasiga ah, inay noqdaan kuwa ugu kalsoonida badan adduunka ee alaabada caafimaadka.
Shirkaddayadu waxay si buuxda u isticmaashaa heerarka qaranka iyo kuwa warshadaha, waxay si adag u xakameysaa geeddi-socod kasta waxayna hubisaa tayada qayb kasta. Ka dib iibinta alaabada macaamiisha, waxaan ku sameyn doonaa baaritaan buuxa oo ku saabsan alaabooyinka, ka dibna waxaan horumarin doonnaa tikniyoolajiyadda iyo tayada. Waxaan sidoo kale helnay dhowr shahaado.
Waxaan leenahay koox xirfadlayaal iib ah, waxay barteen farsamada ugu fiican iyo geedi socodka wax soo saarka, waxay leeyihiin khibrado sanado ah iibka ganacsiga ajaanibta, iyadoo macaamiisha awood u leh inay si aan kala sooc lahayn ula xiriiraan oo ay si sax ah u fahmaan baahida dhabta ah ee macaamiisha, iyagoo siinaya macaamiisha adeeg shaqsiyeed iyo alaabooyin gaar ah.
Shirkaddu waxay leedahay koox cilmi baaris xoog leh, in ka badan 30% kooxda shirkaddana waxay ka shaqeeyaan cinwaano sare oo xirfad sare ah iyo shahaadooyin dhaqtarnimo ... Waxaan Abuureynaa summad hoggaamineed ka dhexeysa shirkadda. Mushahar la mid ah soo celinta, qiimaha u dhigma qiimaha, oo shaqaalaha, macaamiisha, saamilayda, iyo alaab-qeybiyeyaasha ka dhigaya xaalad guul-guul.